Accueil > Gazetin'ny nosy > Fiza: Nahazo fankaherezana tamin’i Ndrenogny Ramasitrakarivo
Fiza: Nahazo fankaherezana tamin’i Ndrenogny Ramasitrakarivo
Tonga nandalo teto Antananarivo ny Ampanjaka Ndrenogny Ramasitrakarivo Martin Gérard sy Ndrenogny Vavy Ravelonirina Lydia izay vadiny ny alarobia faha 14 febroary ka hatramin’ny sabotsy faha 17 febroary 2018 lasa teo. Fivahiniana ara-pianakaviana ihany no nataony teto Antananarivo tamin’izany. Na dia izany aza dia nohararaotin’ny Fiza (Fikambanan’ny zanaka Anteony) avy ao Vohipeno teto Antananarivo ny nihaonana taminy tamin’izany. Ny Colonel Andrianasoavina Charles izay filohan’ny fikambanana Fiza niaraka tamin’ny birao vaovao izay tarihiny no nihaona tamin’ity raiamandreniben’ny firenena ity. Tamin’izany no nifanakalozan-kevitra momba ny fanatsarana ny fikambanana Fiza manokana ary ny tanjona ho tratrariny amin’ny maha fikambanana nentim-paharazana sy fihaviana azy. Nanamafy Ndrenogny Ramasitrakarivo Martin Gérard ny amin’ny fanajana ny fomba sy ny fady ary ny fifankatiavan’ny samy Antemoro ary ny Antemoro sy ny Malagasy manontolo. Nirary soa ho an’ny fikambanan’ny firaisan-kinan’ny Antemoro amin’ny alalan’ny FIANTA ity ampanjaka-be Ndrenogny avy ao Ivato Fenovola ity ary nirary soa ho an’ny birao vaovaon’ity fikambanana ity hahavita soa ny adidy nankinin’ny mpikambana aminy.
Ny Colonel Andrianasoavina Charles raha nanontaniana ny fihaonana nataon’izy ireo tamin’izany dia nanambara fa tsy misy intsony ny mihoatra ny fihaonany tamin’i Ndrenogny Ampanjaka ao Fenovola Ivato iny sady mazava ny tiany hahatongavana ka ny manatanteraka izany no tsy maintsy hataon’izy ireo.
Raha miverina amin’ny tantara isika dia ao amin’ny lapan’ny Fenovola Ivato ao Vohipeno no renivohitra ny fanjakana eto Madagasikara. Ny taona 1337 no nanorina fanjakana teto Madagasikara voalohany ny ampanjaka Ramakararo izay razamben’ny Antemoro. Ny lapa lehibe indrindra sy isan’ny manan-kasina indrindra eto Madagasikara dia niorina tamin’ny taona 1504 izay naorin’ny zafin’ity Ramakararo ity tao Fenovola Ivato Vohipeno. Ny zanak’ity ampanjaka Ramarohala na Andriamarohala ity 12 lahy no antsoina hoe Anteony amin’ny foko Antaimoro. Ny fanjakana indray dia ivondronan’ny Anteony, ny Antalaotra sy ny Anakara ary ny Ampanabaka. Ireo telo ireo no maha Antemoro ny Antemoro.
Ny taona 1575 vao tafatsangana ny fanjakana teto Imerina ka teny Ambohitrabiby no nanjaka i Habib izay nohagasiana ka natao hoe Rabiby. Io no nahatonga ny anarana hoe Ambohitrabiby, izay ipetrahan’ny hasin’ny eto Imerina ka mahatonga ny fankalazana ny taom-baovao malagasy atao eny amin’ity toerana ity ihany. Habib izay mbola misy ifandraisany amin’ny Antemoro ihany satria avy amin’ny Anjoaty avy any Iharana na Vohémar, izay nisy ny anabavin-dRamakararo nanambadiany rehefa tonga teto Madagasikara izy ny taona 1336. Nanomboka teo dia naka ny Antemoro avy any Vohipeno ny Ambaniandro hampianatra azy zavatra maro fa indrindra ny fomba Tatsinanana izay mbola iainana eto Imerina sy Madagasikara manontolo hatramin’izao.
Raha ny voalazan’i Colonel Charles Andrianasoavina dia hisy ny fitsidihana hataon’izy ireo amin’ny Fiza manerana ny nosy ary ny Antemoro tsy ankanavaka mba hanatanterahana ny tenin’ny Ndrenogny Ramasitrakarivo Martin Gérard.